VaFarisi Vanotambudza Murume Akazvarwa Ari Bofu | Upenyu hwaJesu
VATUNGAMIRIRI VECHITENDERO “MAPOFU”
VaFarisi havabvumi kuti Jesu aporesa murume akazvarwa ari bofu, saka vanodaidza vabereki vake. Vabereki vacho vanoziva kuti vanogona “kudzingwa musinagogi.” (Johani 9:22) Kuitirwa izvozvo kwaizoita kuti mhuri iyi itadze kuwadzana nevamwe vaJudha izvo zvaizounza nhamo yemari yakakura kumhuri yacho.
VaFarisi vanovabvunza mibvunzo miviri: “Uyu ndiye mwanakomana wenyu wamunoti akaberekwa ari bofu here? Saka iye zvino ava kuona sei?” Vabereki vacho vanopindura kuti: “Tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu uye kuti akaberekwa ari bofu. Asi kuti zvino ava kuona sei hatizivi.” Kunyange zvazvo vabereki ava vangave vaudzwa nemwana wavo zvaitika, vanonyatsochenjerera mapinduriro avo voti: “Mubvunzei. Iye akura. Anofanira kuzvitaurira.”—Johani 9:19-21.
Saka vaFarisi vanodana murume uya zvakare vachida kumutyisidzira vachiti pane zvakaipa zvavanoziva nezvaJesu. Vanoti kwaari: “Kudza Mwari; tinoziva kuti munhu uyu mutadzi.” Murume akanga ari bofu anopindura mashoko avo ekuda kupa Jesu mhosva achiti: “Kana ari mutadzi ini handizivi.” Asi anoti: “Ndinoziva chinhu chimwe chete, kuti, kunyange ndanga ndiri bofu, panguva ino ndava kuona.”—Johani 9:24, 25.
VaFarisi havasati vagutsikana, saka vanoenderera mberi vachiti: “Aitei kwauri? Asvinudza sei maziso ako?” Murume wacho anoratidza ushingi paanovapindura kuti: “Ndatokuudzai, asi hamuna kuteerera. Munodirei kuzvinzwa zvakare? Munodawo kuva vadzidzi vake here?” Nehasha, vaFarisi vanoti: “Iwe ndiwe mudzidzi womunhu iyeye, asi isu tiri vadzidzi vaMosesi. Tinoziva kuti Mwari akataura naMosesi; asi kana ari munhu uyu, hatizivi kwaanobva.”—Johani 9:26-29.
Achiratidza kushamiswa, mupemhi uyu anoti: “Chokwadi ichi chishamiso, kuti hamuzivi kwaanobva, asi iye asvinudza maziso angu.” Murume wacho anobva atsanangura kuti Mwari anoteerera uye anokomborera munhu akaita sei achiti: “Tinoziva kuti Mwari haateereri vatadzi, asi kana munhu achitya Mwari uye achiita zvaanoda, anoteerera iyeyu. Kubvira kare hazvina kumbonzwika kuti munhu akasvinudza maziso omunhu akaberekwa ari bofu.” Anobva apedzisa nerokuti: “Kudai munhu uyu aisabva kuna Mwari, hapana chinhu chaaimbogona kuita.”—Johani 9:30-33.
Vatadza kuramba mashoko emupemhi uyu, vaFarisi vanomunyomba vachiti: “Iwe sezvauri wakaberekerwa muzvivi, asi zvino wava kutidzidzisa here?” Vanobva vamudzingira kunze.—Johani 9:34.
Jesu paanonzwa zvaitika, anotsvaga murume wacho omubvunza kuti: “Uri kutenda muMwanakomana womunhu here?” Murume wacho aporeswa anopindura kuti: “Changamire, iye ndiani kuti nditende maari?” Achiita kuti asare asina mubvunzo kuti ndiani, Jesu anoti: “Wamuona uye, kunze kwezvo, ari kutaura newe ndiye iye.”—Johani 9:35-37.
Murume wacho anopindura kuti: “Ndinotenda maari, Ishe.” Achiratidza kutenda uye kuremekedza Jesu, murume uyu anomupfugamira, Jesu wacho obva ataura mashoko akadzama okuti: “Ndakauya munyika ino nokuda kwokutonga uku: kuti vaya vasingaoni vaone uye vaya vanoona vave mapofu.”—Johani 9:38, 39.
VaFarisi, avo varipowo, vanoziva kuti havasi mapofu. Asi basa ravakazvipa rokutungamirira vanhu pakunamata, vari kuriita sei? Vanoona kunge vanoriita nemazvo saka vanobvunza kuti: “Tiri mapofuwo here?” Jesu anoti: “Kudai maiva mapofu, mungadai musina chivi. Asi zvino munoti, ‘Tinoona.’ Chivi chenyu chinoramba chiripo.” (Johani 9:40, 41) Zvimwe dai vanga vasiri vadzidzisi muIsraeri, kuramba kwavo Jesu kwaigona kunzwisisika. Zvino nekuziva kwavanoita Mutemo, kuramba kwavo Jesu chivi chakakura.
Chii chinoita kuti vabereki vemupemhi aimbova bofu vatye pavanodanwa nevaFarisi, uye vanovapindura sei?
VaFarisi vanoshatiriswa nemashoko api anotaurwa nemurume aimbova bofu?
Nei vaFarisi vasina chikonzero chinonzwisisika chokuramba Jesu?